“Marka ummad la doonayo in laga adkaado, mukhaadaraad ayaa la dhexgeliyaa.” Sheekh Dirir | Berberanews.com
Home WARARKA “Marka ummad la doonayo in laga adkaado, mukhaadaraad ayaa la dhexgeliyaa.” Sheekh...
Hargeysa-(Berberanews)-Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir ayaa bulshada uga digay halista mukhaadaraadka, uguna baaqay inay ka feejignaanaadaan isticmaalkiisa, ilaahay SW uga toobad keenaan dadka ku dhacay xumaantiisa.
Dhibaatooyinka mukhaadaraadka oo Sheekh Maxamed ka waramay ayaa sheegay inay ka mid yihiin burburinta ummada, taasoo ummada had iyo jeer isticmaasha mukhaadaraadku ku burburto, gaa ahaan dhalinyaradooda. Marka dadku mushkilada doortaana Ilaahay SW wuu dulleeyaa. Sida Ilaahay aayad macnaheeda inoogu sheegay, “Dadku markii ay leexdeen, anniguna waan sii fogeeyey”
Previous articleTaiwan representative to Somaliland named
Next articleShiinaha iyo Soomaaliya oo Isla Hor Fadhiistay Calaacal Khuseeya Qaddiyadda aan Gacmaha Ugu Jirin ee Somaliland iyo Taiwan